चीन सर्पिल घायल गस्केट कारखाना र निर्माताओं | नोर्टेक
सर्पिल घायल गस्केट
निकास र तातो आदानप्रदानको लागि सर्पिल घाइते गस्केट र आणविक ग्रेड र HDLE सर्पिल घाव गस्केट। NORTECH छ एक अग्रणी चीन सर्पिल घायल गस्केट निर्माता र आपूर्तिकर्ता।
घुमाउरो घाँसेको गासकेट भनेको के हो?
सर्पिल घायल गस्केट भि-आकार वा डब्ल्यू-आकार धातु स्ट्रिपको समावेश गर्दछ र गैर-धातुत्मक फिलर सर्पिलिंग र वेल्डिंग भित्र। विभिन्न flanges अनुसार, यो भित्री र बाहिरी रिings भित्र वा बाहिर हुन सक्छ। यसले दुबै तापक्रम र दबाबको र अत्यन्त परिचित संक्षारक र विषाक्त मिडियाको बिरूद्ध सब भन्दा उत्तेजित अवस्थाहरू पूरा गर्न सक्छ। सर्पिल घाव गस्केटहरू तातो विनिमय, निकास, आणविक, HDLE, आदि को क्षेत्रमा व्यापक रूपमा लागू गरिएको छ।
सर्पिल घायल गस्केट प्राविधिक विशिष्टता
निकास सर्पिल घाव गस्केट
सर्पिल घाव ग्यास्केट हामीले दबाब, तापमान परिवर्तन र flanges को सतह दोष यसको संवेदनहीनताको लागि यांत्रिक कम्पन को प्रभाव हटाउन आपूर्ति। उत्कृष्ट कम्प्रेसन लचिलो, सील प्रदर्शन, लामो जीवन प्रयोग गर्दै। यी सुविधाहरूले प्रमाणित गर्दछ कि यो वास्तवमै निकासको लागि उपयुक्त छ।
हीट एक्सचेन्जको लागि घुमाउरो घाव गस्केटहरू
गर्मी विनिमय को लागी SWG खोल र ट्यूब प्रकार हीट एक्सचेंजर मा प्रयोग गरीन्छ। तिनीहरू धेरै फरक आकार, आकारहरूमा निर्माण गर्न सकिन्छ, एकल वा डबल बारहरू सहित वा बिना, आन्तरिक र बाहिरी रिंगको साथ वा बिना। पास बारहरू भित्री रिंगमा सुरक्षित हुन्छन् या त ठोस धातु वा डबल ज्याकेट गरिएको निर्माणमा आपूर्ति गर्न सकिन्छ। पसलहरू सुरक्षित रूपले घुमाउने घाउको आईडीमा सुरक्षित गरियो। हाम्रो तातो एक्सचेन्ज गस्केटहरू धेरै प्रकारको उत्पादन गर्दछ जुन धेरै माग भएका अनुप्रयोगहरू पूरा गर्दछन्। कृपया गास्केटलाई गर्मी एक्सचेन्जमा पसलहरूको साथ प्रयोग गरिएको छ भने निर्दिष्ट रेखाचित्रहरू प्रदान गर्नुहोस्।
घुमाउरो घावको गास्केट केको लागि प्रयोग गरिन्छ?
सर्पिल घायल गस्केट रिफाइनरिज, उर्जा, रसायनिक, फोहोर पानी, पल्प र कागज इत्यादिका लागि उद्योग मानक हो। तिनीहरू सामान्यतया १ 150० # दबावको वर्ग भन्दा बढी अनुप्रयोगहरूको लागि प्रयोग गरिन्छ। धातुको दायराबाट बनेको, सर्पिल घाउ गस्केटहरूले धातुको चौराइ निचोड़ेर एउटा कम्प्रेसिभ लोडको साथ काम गर्दछ जुन त्यहाँ v आकारको कारण कम्प्रेसनबाट रिकभर हुने क्षमता छ।
अघिल्लो: फोर्ज स्टील फ्ल्यांज
अर्को: Inverted दबाव संतुलन लुब्रिकेट प्लग भल्भ
रबर विस्तार संयुक्त ट्विन गोला